Maxay tahay eedeynta ay AMNESTY u jeedisay DFS? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay eedeynta ay AMNESTY u jeedisay DFS?
Maxay tahay eedeynta ay AMNESTY u jeedisay DFS?
Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa Cilmi baaris cusub oo ay soo saaartay waxay ku sheegtay, Faafida Covid-19 ee Soomaaliya in ay iftiimisay baahida loo qabo in si deg-deg ah wax looga qabto arrimaha halista ah ee soo jireenka ah ee horyaalla nidaamka daryeelka caafimaadka ee Soomaaliya.
Warbixinta oo ciwaan looga dhigay “Waxaan daawanay bukaanadii Covid-19 oo dhimanaya” ayaa banaanka keentay sida uu u liito nidaamka Caafimaad ee Soomaaliya.
Warbixinta Amnesty ayaa lagu sheegay in hal isbitaal oo ku yaalla Muqdisho laga maamulo dhammaan kiisaska ku saabsan COVID19 ee ku faafay guud ahaan gobollada Koonfurta iyo bartamaha, tan iyo bilowdgii cudurkaan, waxayna cilmi-baaristu sheegtay in xogta caafimadka ee bukaanada ay tahay mid aad u xaddidan.
“Jawaabta dowladda Soomaaliya ee masiibada waxay ahayd mid aan ku filneyn marka loo eego yaraanta oksijiinka iyo helitaan la’aanta adeegyada ambalaasta, kuwaas oo dhammaantood ka dhashay dayacaad sannado ah,” ayuu yiri Agaasimaha Amnesty International ee Bariga iyo Koonfurta Afrika ee lagu magacabo Deprose Muchena.
Amnesty ayaa madaxda Dowladda Soomaaliya ugu baaqday inay deeqaha la siiyo ay si mas’uuliyadi ku jirto loogu isticmaalo hagaajinta iyo bixinta daryeelka caafimaadka ee guud ahaan gobollada iyo magaalooyinka Soomaaliya.
Hey’ada Amnesty International ayaa tilmaantay in miisaaniyadda dawladda intii u dhaxaysay 2017 iyo 2021 ay muujineyso in celceliska miisaaniyadda loo qondeeyey mashaariicda caafimaadka ay aheyd 2% oo kaliya, taas oo sida ay warbixintu shaaca ka qaadeyso aan caawin karin maareynta kiisaska caafimaadka ee Soomaaliya.
Sidoo kale, Falanqayn ay Amnesty International ku samaysay miisaaniyadda dawladda ayey ku sheegtay in miisaaniyadda loo qoondheeyey amniga oo ay ku jirtay Wasaaradda Gaashaandhigga ay tahay 30%, waxayna ku baaqday in miisaaniyada Caafimaadka la gaarsiiyo 15% si wax looga qabto xaaladda caafimaad ee Soomaaliya.
Warbixinta ay soo saartay Hey’adda Amnesty ayaa kusoo aadeysa, xilli ay Soomaaliya mar kale wajaheyso kiisas cusub oo COVID19 ah, kaas oo galay wajigii sedexaad ee faafitaankiisa, waxaana jira dad badan oo maalin kasta u dhinta cudurkaas.